Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "USanta omkhulu“. Indaba yethu yengane ye-Childhood Story Plus ye-Untold Biography ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo Nokuvuka kuka-Allan Saint-Maximin. Ama-Credits Wezithombe: ChronicleLive, 90Min, Twitter kanye neGetFootballNewsFrance
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uSanta-Maximin uhlukile, i-jack ebhokisini elihamba ngejubane, ikhono namaqhinga akhe enkundleni eba abalandeli bebhola abajabule. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abayibheka i-Biography ka-Allan Saint-Maximin's Biography futhi iyathakazelisa. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
Ukuqala, amagama akhe agcwele Allan Irénée Saint-Maximin. Wazalwa ngosuku lwe-12th lwangoMashi 1997 kunina, uNadège Saint-Maximin, nobaba u-Alex Saint-Maximin eChâtenay-Malabry, indawo engaphansi kwedolobha eliseningizimu nentshonalanga yeParis, eFrance.
Njengabafowenu; Thomas Lemar, Thierry Henry, I-Dimitri Payet futhi Kingsley Coman, indoda yaseFrance ngeyakhe Iqembu lesizwe laseFrance laseGuianese Creole ngezimpande zomndeni wakwaCarribean naseNingizimu Melika. Yize azalelwe eFrance, uSanta-Maximin umndeni wakhe udabuka emazweni aseGuyana (uhlangothi lukanina) noGuadeloupe (uhlangothi lukayise).
Ukuzalwa kwabazali abacebile kunikeze uSanta-Maximin isiqalo esikhanyayo empilweni. Wakhulela emndenini osezingeni eliphakeme futhi wayekhululeka kakhulu njengomntwana. Abazali baka-Allan Saint-Maximin babenemfundo enhle kakhulu yezimali futhi abakaze bazihluphe ngezimali. Uthi bewazi?… Umama wakhe wake waba nesikhundla 'umqondisi wezemfundo'esikoleni esidumile esiseParis Suburbs ngenkathi ubaba wakhe u-Alex esebenza njengomphathi wehhovisi eParis Diderot University eseParis, eFrance. Bobabili abazali bakhulisa izingane zabo banamathela enkolweni yobuKristu yenkolo.
Iminyaka Yokuqala: U-Allan Saint-Maximin wakhuliswa njengomncane kunabo bonke ezinganeni ezintathu. Unomfowethu osekhulile ogama lakhe nguKurtys kanye nodade ogama lakhe lingaziwa ngaleso sikhathi sokubhala. Ukukhulela edolobheni laseMeudon, uSten-Maximin osemusha waqala ukudansa nemfashini njengezinto zokuzilibazisa. Leyo ndlela yemfashini empilweni yambona ethatha ukufana kwamabhulukwe ekhanda, intuthuko eyaqhubeka nanamuhla.
Uthando luka-Allan Saint-Maximin ngamabhande asekhanda alulusha. Isithombe sakhe sobuntwana sisho konke. Isikweletu: I-DailyMail
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Abazali bakaSaint-Maximin kanye nothisha besikole bamnikeze wonke amagugu adingekayo ukumenza abe mkhulu ngenkathi ekhula. Emuva ngaleso sikhathi esengumfana omncane wesikole, u-Allan wayenikezwa ama-10 euros ngumama wakhe njalo lapho ephuma ekhaya eya esikoleni. Wachitha imali ethenga amaswidi futhi esekela abangane bakhe abadinga usizo (Isibonakaliso sokuphana kwakhe kwasekuqaleni). Ngenkathi usesesikoleni, ithalente likaSanta-Maximin kwezemidlalo kanye nebhola latholwa futhi futhi waqokwa ngalo ngaphandle kokuthola umqeqeshi noma umeluleki. Ekhuluma ngalokho, wake wathi;
“Ithalente lami lafika kimi ngokwemvelo. Ngathatha ibhola yonke indawo, esikoleni, ekhaya, njll. Ngangidlala ibhola ngasosonke isikhathi yize ngingaqeqeshiwe. Kwakuyindlela yami, ngendlela engangiyifuna ngayo. Ijubane namandla ami afundisiwe ”
Kuzo zonke izinketho zemidlalo, Kwakungemidlalo eyaqala yabonga udumo lwayo lwendalo ngokugijima obekulokhu eyisa ingane. Kamuva, wasebenzisa i-Athletics ebholeni futhi waqala ukudlala lo mdlalo nomfowabo omdala, uKurtys ngaleso sikhathi owayefuna ukuba ngumdlali webhola. Kusenesikhathi, uSanta-Maximin wathembela kumakhono akhe, intuthuko eyamenza wakholwa ukuthi unethalente lokuya ochwepheshe.
Ukumaka eceleni komfowabo, umsebenzi wokuqala kaSanta-Maximin waba ngaye ukuthi afunde ukwenza izinto ezingavamile ngebhola lebhola. Ukwenzile konke lokho egameni lokugqama esixukwini sabafana endaweni yakhe- indawo lapho kunamathuba khona ebhola elincane. Usuku nosuku, indoda yaseFrance yaqala ukuhlonipha amakhono ayo kukhonkolo nakotshani. USanta-Maximin wadlala nabafana abaseminyakeni yobudala yomfowabo (iminyaka emibili noma emithathu isikhulu sakhe).
Ijubane likaSaint-Maximin elisheshayo elihambisana namakhono okushaya amanzi bambona edlula kakhulu kunabo bonke abanye abafana endaweni yangakubo. Umdlali webhola lomgwaqo obengafundiswanga waba nenhlanhla yokuthola ithuba lokuhlolwa noVerrières-le-Buisson, iklabhu yasendaweni- 34 amaminithi ukushayela kanye 10.8km emndenini wakhe. Ngaleso sikhathi bobabili abafowethu (uKurtys ukuthi ungowokuqala) waphumelela ukwamukelwa the academy, injabulo ye ISanta-Maximin's amalungu omndeni empeleni ayengenamingcele.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Njengomncane, uSanta-Maximin wafunda ukuhweba emakilabhini wentsha iVerriere-le-Buisson izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuthuthukela kwelinye iklabhu, i-US Ris-Orangis okwakungeyona eminye imininingwane. 55 amaminithi drive / (34.5 km) ukusuka ekhaya lomndeni wakhe eMeudon. Ekilabhini, wayenakekelwa othisha ababili, UJean-Louis Lessard futhi Didier Demonchy. USanta-Maximin wadlala ngaphansi kokuqeqeshwa kukathisha wakhe uFrédéric Ferreira ngesikhathi sakhe seminyaka eyi-3.
Njengoba abaningi bebengalindela, waba nesiqalo esihle emsebenzini wakhe. USanta-Maximin wayejabulisa ukubukwa ngenxa yokubukisa kwakhe njalo ijubane kanye namakhono. Lokhu kwagqama ukumbona ethuthukela esikhungweni semfundo ephakeme saseFrance okuthiwa i-ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) ngonyaka we-2007.
I-ACBB kwakungeyona nje i-academy, kodwa uhlobo lomdlalo lapho bonke abazali babefuna ukubhalisa izingane zabo. Lokhu bekwenza ngoba i-academy yayinedumela lokuqhakambisa abadlali bayo emakilabhini aphezulu eFrance. UHatem Ben Arfa, uYacine Bammou, ukubiza kodwa abambalwa badlula eklabhu.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela
Ngenkathi uSaint-Maximin ekhula esemusha, waqala ukuphupha ukudlala ku Premier League. Ngaleso sikhathi, umfana waseFrance wayeqhubeka nokubuka i-Arsenal Thierry Henry usuku lonke kuthelevishini.
Isebenzela ukufezekisa amaphupho akhe, inkanyezi entsha yaqhubeka nokwenza lokho ebekade ikwenza kangcono kakhulu ekwindini yokudlala- ukuzwakalisa ukubukeka kwakhe nangejubane lakhe ngendlela ehlukile. Echaza ukufana kwakhe ngababili, uSaint-Maximin wake wathi;
“Esikhungweni semfundo ephakeme, baqeqesha, touch eyodwa, touch ezimbili. Wonke umuntu wabona ukuthi ngakhuliswa ngendlela ehlukile. Ngishaye kakhulu futhi kwathiwa angidlale ngabafana abakhulu nabanamandla. Ngifunde ukuthi ngizishaye kanjani kanti ngasikhathi sinye, ngaboshwa izindiza ”
Umqeqeshi wakhe ngaleso sikhathi, Guillaume Sabatier, wakhe iqembu lakhe eduze kwakhe. Emdlalo wakhe wokuqala wokuncintisana, u-Allan Saint-Maximin wenza umbono ngokushaya amagoli we-8. Uma kubhekwa into esemncane, waba nedumela elikhulu phakathi kwabaqashi kulo lonke elaseFrance. Kungekudala, uSanta-Maximin uthathe isinqumo esikhulu somsebenzi wakhe wokuzibandakanya ngokujoyina iSaint-Étienne, iklabhu elalimnika indlela ephephile ebhekise ekuthwesweni iziqu zakhe ngonyaka ka-2013.
At I-Saint-Étienne B, USanta-Maximin waba ngomunye wabadlali babo abaqhakaze, intuthuko eyamenza waba nesidumo sezwe laseFrance. Ngeshwa, ukuthuthukela eqenjini elikhulu lekilabhu akubonanga ubuhlakani beFrance buthola isikhathi esanele sokudlala. Ukuya eMonaco akusebenzanga futhi njengoba iSaint-Maximin ingakwazanga ukubeka ibhentshi UBernardo Silva, U-Anthony Martial futhi João Moutinho ababesephezu kwamandla abo.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
Ukuhamba ngemalimboleko ukuya I-Sporting Club Bastiais waba yinkambo yokwenza okunokwethenjelwa kakhulu yeSanta-Maximin, engazange ikhokhe nje kuphela kodwa ikholise uNice ukuthi amsayine esuka eMonaco ehlobo le2017.
E-Nice, uSaint-Maximin waqala ukwenza iminyakazo emandla, waba ngumdlali odlala phambili wekilabhu ngaphansi kukaPatrick Viera. Ukwenza kwakhe ikilabhu kudonsile imenenja yeNewcastle United uBruce obefuna umuntu ozojabulisa abalandeli bakhe, okubenza bangene ezihlalweni zabo.
Amaphupho wePremier-Maximin wePremier League agcina enziwe ukuthi abe khona ngemuva kokujoyina iNewcastle kwi-2nd ka-Agasti 2019. Ngokushesha nje kwisizini ye-2019 / 2020, umsizi webhola ozenzakalelayo onesigqoko esimfushane, ama-spiky dreadlocks aqala ukujabulisa abalandeli. USanta-Maximin uthole izinhliziyo zabavikeli bePremier League ebaleka nokuqhuma kwakhe phambili.
U-Allan Saint-Maximin ngokushesha waba abalandeli abathandekayo kwisizini yakhe yokuqala yeligi yePremier. Isikweletu Sezithombe: IDailyMail
Ngaso sonke isikhathi iSaint-Maximin yayinabhola, uyazi ukuthi uzokwenzenjani- ukusonta, ukuphenduka, ukubabaza, ukubhukuda, ukuphikisana nabaphikisi besikhathi esidlule nokushayela phambili ngebhola elihlanganiswe ezinyaweni zakhe. Ukummisa kungolunye udaba njengoba kubonwe engxenyeni yobufakazi bevidiyo ngezansi.
Ukubuka ividiyo ngenhla, uzovuma ukuthi uSanta-Maximin, ngaphandle kokungabaza, 'IJack ' ebhokisini. Faka amandla akhe obuqili nobuqili (ebumnyameni bakhe obumnyama nomhlophe), i-winger enamandla futhi inesidingo esikhulu samandla sokwenza i-talismanic alulame. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo.
Ngesikhathi sokubhala, akungabazeki ukuthi uSaint-Maximin ungumdlali obaluleke kakhulu eqenjini leNewcastle futhi ungomunye wabadlali abajabulisa ukubukwa kuPremier League. Ngaphandle kokungabaza, abalandeli bebhola likanobhutshuzwayo basethubeni lokubona umntwana omncane eqhakaza ithalente elisezingeni lomhlaba phambi kwamehlo abo. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo, nakanjani iningi labalandeli beNewcastle kumele licabangisise ukuthi empeleni u-Allan Saint-Maximin ushadile futhi usahlala nonkosikazi wakhe noma unentombi yakhe. YEBO! Akunakuphikwa ukuthi ukubukeka kwakhe okuhle kuhlangene nesitayela sakhe sokudlala bekungambeka ohlwini lokufisa lwentombi yakhe engaba khona.
Ngokuya kwe-WTFoot, lo mFulentshi wake wasolwa ngokuthandana nentombazane egama linguMargaux ngase2015, ngesikhathi sakhe neklabhu yaseGerman (Hannover 96). Ngokwemibiko, uMargaux (osesithombeni ngezansi) manje uyintombi yakhe yakudala.
U-Allan Saint-Maximin wake wathi uthandana noMargaux. Isikweletu Sezithombe: I-WTFoot
Ngesikhathi sokubhala, u-Allan Saint-Maximin ubusiswe ngamadodakazi amabili athandekayo (uLyana noNinhia) awabiza ngokuthi Amakhosazana akhe. Njengoba kuphawuliwe ngezansi, ama-braids amangalisayo kuzinwele zamantombazane zombili ayisibonakaliso esihle somfanekiso kababa wabo nokufana kwazo. Esithombeni ngakwesobunxele kuhle uLyana (kwesobunxele) noNinhia (kwesokudla) njengoba bejabulela ukunethezeka okunethezekile kukababa wabo omkhulu.
Hlangana namadodakazi ka-Allan Saint-Maximin- uLyana noNinhia. Isikweletu Sezithombe: TheTimesUK
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi i-Allan Saint-Maximin Life Life kude nakho konke ukudonswa kwakhe nobuqili bokuphamba kungakusiza ukuba ubheke kangcono ubuntu bakhe.
Ukuqala, lapho ngempela kuye kakhulu kunamakhono akhe, ubucwebe kanye namalebula oklami. Yebo!, Ungafunga ukuthi unodaka nje. Kepha USanta-Maximin empeleni ungumuntu ohlakaniphile nomuntu ojwayelekile owaziyo ukuthi wenzani okuyinto; ukubeka abanye kuqala ngaphambi kwakhe. Ekhuluma ne-BBC, USanta-Maximin wenza umhlaba wazi ngesifiso sakhe sokwenza konke okwenzekayo, ukuhlekisa abalandeli, ukusiza abanye abadlali noma ngabe kusho ukuthi ungashayi igoli. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo.
Kusasele inyanga ngemuva kokujoyina iNewcastle, abalandeli be-England North East bethanda izindlela zabo zokuhlonipha udumo lwenkanyezi- intuthuko eyazala izingulule zakhe. USanta-Maximin unengoma ethandwayo ngegama lakhe- eliculwa hhayi nje ngezikhathi zomdlalo kepha yonke indawo kufaka phakathi amakilabhu. Yilalele ngezansi;
Kubalandeli abaningi, ukuba nesidlali esijabulisayo kodwa nokho esijabulisayo njengoSaint-Maximin kulesi sizukulwane kuyinto enhle ukubona. Ung, ngokungangabazeki, ungumuntu othandekayo, ongabazali beNewcastle abafuna izingane zabo zizilingise lapho sezikhulile. USanta-Maximin uthole inhlonipho engaphezulu kubalandeli abancane abaningi abamkhumbule ngekhanda, ukuyicula ngokungenaphutha.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Ngesikhathi sokubhalwa, u-Allan Saint-Maximin usungule owakhe umndeni wakhe ngokubhekelela amabombo emisebenzini yakhe yebhola. Abazali bakhe benze imizamo eqotho yokugwema ukunakwa kwabezindaba. Amarekhodi omkakhe, udadewabo kanye namalungu omndeni asafihliwe. Kungenzeka babe nezikhathi ezinhle kakhulu zokuphila kwabo ngenxa yokuthi enye yazo iyindumezulu. UKurtys ongazange enze ebholeni lezinyawo njengamanje usebenza njengomeluleki wakhe wemisebenzi kumfowabo omncane.
USanta-Maximin ujabulela lapho amalungu omndeni wakhe enikeza abaswele usizo. Uthi bewazi?… Enye yezinto zokuqala azenza lapho efika eTyneside ukwamukela isimemo naseNUFC Fans Food Bank- okuyindawo ekhombisa ubuphofu obushaya izingwadla ezinkulu zaseNorth East England. Imizamo yabezindaba yayigxile kakhulu kumadodakazi akhe; ULyana noNinhia ngesikhathi seminikelo yabo.
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Ukwazi indlela yokuphila ka-Allan Saint-Maximin's kungakusiza uthole isithombe esiphelele sempilo yakhe.
Ukuthola imali ezungeze i- € 2,000,000 ngonyaka ngomholo wamasonto onke we- $ 38.462 (ngaleso sikhathi sokubhala) ngokuqinisekile kumenza abe yibhola yebhola lezinyawo- inkomba yendlela yokuphila kanokusho. Umdlali webhola osesitayeleni uyazijabulisa ngokuphila kobukhazikhazi obonakala kalula ngaye sedan kanokusho ebaluleke ku- $ 151,600 (umholo wakhe amasonto amabili nesigamu).
Imoto ka-Allan Saint-Maximin
Futhi ngendlela yokuphila, yoh futhi ngiyazi ukuthi iSaint-Maximin inomqondo omuhle wemfashini njengoba ubonwa ekushayweni kokudlala. The Indoda yaseFrance ingumugulazi wemfashini, othanda ukubukeka ubukhazikhazi kokubili nokungaphezulu kwephimbo. Njengoba kubonwe eminyakeni yakhe yobudala, umklami onikelayo (ikakhulukazi amabhande asekhanda) kube ukubukeka kwakhe njengesiginesha kusukela ezinsukwini zakhe zokuqala.
Indlela yokuphila ka-Allan Saint-Maximin ayizange iqale namuhla. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram
Ama-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Watshelwa ukuthi amboze iStouch Designers sakhe Sticker: Uthi bewazi?… Inkanyezi yaseNewcastle u-Allan Saint-Maximin wake waphoqeleka ukuthi amboze isicoco sakhe se- $ 180 Gucci nge-STICKER ngesikhathi benqoba iManchester United ukuze bagweme ukwephula imithetho yokuxhaswa. Ngaleso sikhashana, umdlali okhohlisayo kwakumelwe abeke ucezu lwamakhandlela amhlophe ngaphezulu kwelogo yeGucci.
U-Allan Saint-Maximin uphoqelekile ukumboza ibhanti lakhe lekhanda le- £ 180 Gucci lapho edlala enkundleni. Isikweletu Sezithombe: Ilanga
I-Allan Saint-Maximin's tattoo for Fans: Having Ama-Superhero tattoos awasenzeli fan. Ukufana kuka-Allan Saint-Maximin ukumbone ethola isisekelo sabalandeli abakhulu. Abalandeli abasebenza kanzima njengale (ngezansi) babengeke bakhathazeke ngokwenza uthando lwabo lwaziwe ngokuthola unomphela tattoo yobuso babo emzimbeni wabo.
Yini yakhe Indlela Yansuku Zonke Ibukeka Njenge: U-Allan Saint-Maximin ungumuntu osebenzisa isu elihlukile le-Workout ukuze uthole futhi uhlale usesimweni. Umdlali webhola omnandi usebenzisa indlela engajwayelekile yokwenza umsebenzi. U-Saint-Maximin ukhetha ukubuyela emuva futhi aqinise izitebhisi zakhe njengendlela ekhethekile yokuzigcina efanelekile.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Allan Saint-Maximin Childhood Indaba Yethu Indaba Engafani Nayo ye-SEO. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.